Waa kuwan tobanka jaamacadood ee ugu fiican suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal abuurka leh faahfaahin buuxda oo la cusbooneysiiyay iyo dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato iyaga si ay kaaga caawiyaan xulashada midka ka mid ah liiska aad iska diiwaangelineyso si aad u horumariso kartidaada arimahan waxbarasho.
Haddii aad had iyo jeer ujeeddo leedahay inaad barato suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal-abuurka ah laakiin aad dareento in dadku kaa yaabi karaan maxaa yeelay qof kastaa wuxuu rabaa inuu ku takhasuso sayniska halka aad rabto inaad ku takhasusto qayb ka mid ah farshaxanka, bilow inaad ka tirtirto fikradaha iyo dareenka noocaas ah. maskaxda.
Suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal-abuurka ahi maahan qaab fudud oo farshaxanimo ah sidoo kalena hoos uma dhigayso, xaqiiqdii, adigoo wax baranaya ilaa heerka ugu sarreeya ee aad ka gaadho waxaad wax ku darsan doontaa adduunka guud ahaan, magac u yeel naftaada, iyo laga ixtiraamo adduunka oo dhan.
Suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal abuurka ah waxay abuurtay tiro wanaagsan oo dad aad u muhiim ah sida qoraaga Harry Potter JK Rowling, Stephen King, Dean Koontz, Tom Clancy, iwm, kuwaas oo suugaan ku kasbaday malaayiin iyo balaayiin doollar, oo si weyn ugu deeqay suugaanta Ingiriisiga iyada oo loo marayo dhiirrigelintooda iyo hal-abuurnimadooda oo caan ku ah shaqooyinkooda adduunka.
Tiradan dadka ah iyo jaamacad wanaagsan oo dhanka waxbarashada ah waa inay kugu dhiiri geliyaan kuna dhiirrigeliyaan inaad raacdo qalbigaaga oo aad u shaqeyso si aad u gaarto hadafyadaada.
1 Suugaanta Ingiriisiga Iyo Qoraalka Hal-abuurka ah
1.1 Maxaa Loo Baran Karaa Suugaanta Ingiriisiga Iyo Qoraalka Hal-abuurka ah?
1.2 Jaamacadaha ugu Fiican Suugaanta Ingiriisiga Iyo Qoraalka Hal-abuurka ah
1.2.1 # 1 Jaamacadda Surrey
1.2.2 # 2 Jaamacadda Manchester
1.2.3 # 3 Jaamacada Brighton
1.2.4 # 4 Jaamacada Huddersfield
1.2.5 # 5 Jaamacadda Kent
1.2.6 # 6 Jaamacadda Leeds
1.2.8 # 8 Jaamacadda Akhriska
1.2.9 # 9 Jaamacadda Oxford Brookes
1.2.10 # 10 Jaamacadda Swansea
1.2.11 Talo soo jeedin
Suugaanta Ingiriisiga Iyo Qoraalka Hal-abuurka ah
Barashada suugaanta iyo qorista hal abuurka leh waxay leeyihiin faa iidooyin aad u tiro badan laakiin ka sii muhiimsan, waxay kuu fureysaa fursado shaqo oo kala duwan qalin jabinta kadib. Waad boorsaysan kartaa inta shahaado ah ee aad rabto qaybtan gaarka ah ee daraasadda maadaama ay tahay mid aad u ballaadhan farshaxanka, waxaad go'aansan kartaa inaad sii wadato shahaadada jaamacadeed ama shahaadada dhakhtarnimada waxay kaliya kaa caawinaysaa inaad ka soo rayso.
Sidoo kale waa inaad ogaataa inay jiraan noocyo kale oo suugaan ah laakiin suugaanta ingiriisiga ayaa ah tan ugu badan, ugu balaaran isla markaana hal dhibic waxay daboolaysaa noocyadaan kale ee daraasaadka suugaanta waana duqnimo sida nin laftigiisa ah tan iyo markaasna wuxuu ka qayb qaadanayay horumarka ninka ilaa iyo hadana waa.
In kasta oo diiradda ugu weyn ee maqaalkeedu yahay in la taxo jaamacadaha ugu wanaagsan ee suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal-abuurka ah ee adduunka oo dhan, way ku caawinaysaa haddii aad ka akhrisan karto qaar ka mid ah tilmaamaha aan horay ugu soo qornay barmaamijkan ee ku saabsan aagga daraasadda Ingiriisiga. .
Horaan qoraal ugu qornay jaamacadaha ugu wanaagsan ee shahaadada koowaad ee Ingiriisiga adduunka waxaan sidoo kale siinay maqaal hagitaan ardayda caalamiga ah ee raba Ingiriisiga ku baro Turkiga.
Waxaan sidoo kale bixinay hagitaan dhameystiran oo ku saabsan jaamacadaha ugu wanaagsan Ingiriisiga Ingiriiska. Dhammaan qodobbadaani waxay ku wajahan yihiin bixinta caawimaadda ardayga doonaya inuu qaato koorsooyin iyo inuu helo shahaadooyin maadada Ingiriisiga.
Maxaa Loo Baran Karaa Suugaanta Ingiriisiga Iyo Qoraalka Hal-abuurka ah?
Dadka badankood waxay u maleynayaan in suugaanta kaliya ay tahay aqrinta dhowr buug oo si wanaagsan loo qoray, qor oo daabaco dhowr ka mid ah. Waxay ubaahantahay waxbadan intaas kabadan, waxaad fiirineysaa sanado badan oo shaqo adag oo daraasad ah, helitaanka xirfado aqooneed iyo waayo aragnimo taas oo ah sababta ay dadku ugaqeyb galaan kuliyadaha iyo jaamacadaha si ay ubartaan xirfadaha iyo aqoonta kuhaboon
Markii aad baraneyso suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal-abuurka ah ee jaamacadda ama kuleejka, diiradda ayaa inta badan diiradda, falanqaynta, iyo fikradda naqdinta ku saabsan tiro badan oo suugaaneed suugaaneed ah oo laga yaabo inay yihiin qaab sheeko-wadaag ah, riwaayado, gabayo, iwm.
Sababaha ugu waaweyn ee looga fiirsado barashada suugaanta ayaa ah;
Si aad uhesho jiheyn ay kamid tahay ka faa'iideysiga awoodahaaga, xoojinta iyo kobcinta xirfadahaaga hanashada dhammaan noocyada shaqooyinka suugaanta, iyo hal-abuurnimo. Waxaad awoodi doontaa inaad ku aragto adduunka indhaha farshaxan gacmeed kaas oo gacan ka geysanaya ogaanshaha nooca tabaruca farqiga aad u soo bandhigeyso adduunka farshaxanka
Fursadaha xirfadeed, sida qoraa wanaagsan, waxaad ka dhigi kartaa malaayiin sanadle ah ama waxaad go'aansan kartaa inaad ka mid noqoto shaqaalaha dadweynaha ama kuwa gaarka loo leeyahay wariye ahaan, maareeyaha waxyaabaha ku jira mareegaha, macallin (borofisar), tifaftire, nuqul qoraaga dijitaalka ah / xayeysiinta, farshaxan yaqaanka, maareeyaha macluumaadka, dadweynaha sarkaalka xiriirka, iwm.
Si aad ugu guuleysato luuqado kale iyo goobo taariikhi-juquraafiyeed qaabeeya suugaanta casriga ah. Shaqooyinka suugaanta Afrikaanka, Reer Galbeedka, iyo Aasiya ayaa wax laga qaban doonaa taas oo kugu qasbi doonta inaad barato luqadaha la xiriira.
Suugaanta Ingiriisiga iyo qoraalka hal abuurka ah, waxaad ku kasban kartaa tiro shahaadooyin ah oo ku xiran hadba inta aad rabto inaad ku gaarto hadafyadaada ama sida aad hamiga u leedahay. Darajooyinka la xidhiidha Suugaanta Ingiriisiga iyo Qorista Hal-abuurka ah ayaa kala ah;
Maaddaama aad waxoogaa aragti ah ka heshay suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal-abuurka ah waxaan sii amba qaadi doonaa liistada jaamacadaha ugu wanaagsan goobta waxbarashada taas oo si weyn kaaga caawin doonta horumarkaaga xirfadeed.
Baadhitaan dheer kadib, waxaan awooday inaan la imaado 10-ka jaamacadood ee ugufiican Suugaanta Ingiriisiga iyo Qoraalka Hal-abuurka ah kuwaas oo hubaal ah inay ku barayaan dhamaan waxaad ubaahantahay inaad ka barato cilmiga barashada oo ay kuu dhisato xirfad mustaqbal leh. Jaamacadahan loogu talagalay suugaanta Ingiriisiga ugu wanaagsan iyo qorista hal abuurka waa;
Jaamacadda caasimadda London
Jaamacadda Oxford Brookes
# 1 Jaamacadda Surrey
Waxaa la aasaasay 1966 oo ku taal Guildford, England, Jaamacadda Surrey waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal-abuurka leh bulshada adduunka ee fikradaha iyo dadka, oo loogu talagalay waxbarashada iyo cilmi-baarista nolosha.
Waxaad baran doontaa shaqooyinka muhiimka ah ee saameynta leh ee suugaanta, aqrinta iyo kahadalka shaqooyinka casriga ah, fasalada, iyo noocyo kaladuwan oo kaa caawin doona inaad horumariso noocyo kaladuwan oo xirfadaha qorista hal abuurka iyo aqoonta, adoo fiirinaya foomamka sida buugaagta, sheekooyinka gaagaaban, shaashadda, buugaagta sawirada , gabayo, iyo riwaayado.
Jaamacadda Surreal waxay bixisaa waxbarid heer sare ah iyo barasho wax ku ool ah si loogu dhiirrigeliyo loona xoojiyo ardayda guul xirfadeed iyo shaqsiyeed, waa meesha kuugu habboon ee aad ku horumarin karto kartidaada suugaanta suugaanta.
# 2 Jaamacadda Manchester
Waxaa la aasaasay 2004 waana qayb ka mid ah sumcadda caanka ah ee kooxda 'Russell Group' ee jaamacadaha, Jaamacadda Manchester, oo ah machad caan ku ah barashada heer sare iyo cilmi baarista hal-abuurka leh waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan barashada suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal-abuurka leh.
Jaamacadda Manchester, waxaad ka qayb qaadan doontaa aragtida suugaanta iyo dhaqanka, waxaad ku baran doontaa qoraallada qaabkooda taariikhiga ah waxayna ka tarjumaysaa dhaqamada iyo dhaqamada kala duwan. Waxa kale oo aad ku horumarin doontaa xirfadaha qoraalka hal-abuurka ee sheekooyinka iyo gabayada iyada oo loo marayo aqoon-isweydaarsiyo ay qabtaan qaar ka mid ah gabayaaga caanka ah, suugaanyahannada, iyo qorayaasha sheekooyinka sayniska.
Hay'addu waxay u heellan tahay cilmi-baaris heer caalami ah, waxbarasho heer sare ah, iyo waayo-aragnimada ardayga taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan ee lagu horumariyo guushaada waxbarasho iyo shaqsiyeed.
# 3 Jaamacadda Brighton
Helay heerka jaamacadeed ee 1992 oo ku taal England, Jaamacadda Brighton waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal-abuurka ah, beel hal abuur leh, firfircoon, iyo arday kala duwan oo ka wada shaqeeya sidii bulshada loogu sameyn lahaa isbeddel wanaagsan.
Isku darka aragtida suugaaneed iyo qoraalkaaga, macallimiinta caanka ah ee jaamacaddu waxay ku bari doonaan inaad noqotid feker dhiirrigeliya iyo qoraa leh xirfad aad u wanaagsan oo hal abuur leh oo hal abuur leh waxaad si siman u fulin doontaa safarro iyo mashaariic cilmi baaris ah si aad si fiican ugu fahamto isku xirnaanta aragtida iyo dhaqanka iyo barashada sida qoraalka wax u qaban karo oo wax loo weydiin karo aragtida.
Si loo horumariyo fahamkaaga xirfadeed ee qoraalka oo aad uga tarjumeyso waxqabadkaaga, suugaanta Ingiriisiga iyo ardayda hal abuurka leh ee Jaamacadda Brighton waxay la shaqeyn doonaan qorayaasha maxalliga ah, daabacayaasha, kooxaha bulshada, iyo shirkadaha.
# 4 Jaamacadda Huddersfield
Shukaansi illaa iyo 19th qarnigii laakiin helay maqaam jaamacadeed sanadkii 1992 oo ku yaalay West Yorkshire, England, Jaamacadda Huddersfield waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal abuurka leh heer sare ee baris iyo barasho iyo tas-hiilaad aad u wanaagsan oo ardayda u suurtageliya inay horumariyaan xirfadaha iyo aqoonta ay u baahan yihiin inay wajahaan adduunka shaqada.
Markii aad baraneyso koorsadan, waxaad heli doontaa inaad aqriso oo aad ka hadasho qaar ka mid ah shaqooyinka ugu waa weyn ee abid la qoro halka qaybta qorista hal abuurka ah lagu bari doono laguna dhiirigelin doono inaad muujiso naftaada oo aad sahamiso kartidaada qoraa ahaan iyo sida loo soo bandhigo shaqooyinkaaga adoo adeegsanaya warbaahinta saxda ah hababkii ugu dambeeyay ama qaab dhaqameed.
Barashada suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal abuurka ah ee Jaamacadda Huddersfield ayaa kaa caawin doonta inaad ku kasbato xirfado wax ku ool ah, oo loo wareejin karo, sida fikirka halista ah, cilmi baarista, wada xiriirka, iyo barashada madaxbannaan, ee looga baahan yahay dunida dhabta ah.
# 5 Jaamacadda Kent
Waxaa la aasaasay 1965 oo ku taal Boqortooyada Ingiriiska, Jaamacadda Kent waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal-abuurka ah iyo hay'ad cilmi-baaris horay u socota oo u heellan awoodda isbeddelka waxbarashada iyo cilmi-baarista, waxay ka caawisaa ardayda inay is-hagaajiyaan kartidooda oo ay horumariyaan si ay ugu guuleystaan ​​dunida dhabta ah.
Markaad barato suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal-abuurka ah ee Jaamacadda Kent, waxaad ku baran kartaa meelaha dhaqameed oo ay weheliyaan suugaanta casriga ah iyo aragtida suugaaneed ee ugu dambeysay. Dhowr ka mid ah barayaasha koorsadan ayaa ah qoraayo iyo gabayaayaal la daabacay kuwaas oo kaa caawin doona inaad horumariso xirfadaha gorfaynta iyo dhaliisha, helitaanka codkaaga oo aad soo saarto qoraallo hal abuur leh oo feker leh.
# 6 Jaamacadda Leeds
Si buuxda ayaa loo aasaasay 1904 oo ku taal West Yorkshire, England, Jaamacadda Leeds waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal-abuurka ah ee caanka ku ah waxbarista iyo cilmi-baarista tayada leh.
Si aad u barato koorsada, suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal-abuurka ah, waxaad u baahan doontaa inaad isku darto habab hal abuur leh oo muhiim u ah suugaanta, macallimiinta caanka ah ee dugsigan ayaa ku bari doona inaad isku darto hal-abuurka iyo fekerka halista ah, waxay kaa caawin doontaa inaad horumariso xirfadaha loo gudbin karo ee wada xiriirka, cilmi baarista, iyo maareynta mashruuca oo ay aad u tixgeliyaan loo shaqeeyayaashu.
Jaamacadda Leeds waa qalcad weyn oo wax lagu barto si loo horumariyo xirfadahaaga iyo aqoontaada suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal-abuurka ah isla markaana si fiican kuugu diyaariso dunida dibaddeeda.
Iyada oo xididdo waxbarasho oo adag ay dib ugu laabaneyso illaa 1848 laakiin si buuxda loo aasaasay 2002, Jaamacadda London Metropolitan waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal-abuurka ah ee adduunka oo dhan oo leh tas-hiilaad waxbarasho oo casri ah iyo macallimiin caan ku ah adduunka. si ay kaaga caawiso inaad kobciso oo aad maamusho xiisaha aad u qabto qaybtan farshaxanka.
Suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal abuurka ah ee Jaamacadda London Metropolitan waxaa wax ka barta aqoonyahanno khibrad leh, gabayaaga la daabacay, iyo suugaanyahanno kaa caawin doona inaad horumariso fahamka suugaanta iyo qorista hal abuurka ah iyada oo loo marayo barashada noocyada taariikhiga ah iyo kuwa casriga ah labadaba duruufaha qaranka iyo kuwa caalamiga ah, baro sida si aad wax uga bedesho shaqadaada, u horumariso qoraalkaaga noocyada suugaanta iyo ganacsiga.
Awoodda aad ka heli doontid barashada koorsadan isku dhafan ee Jaamacadda London Metropolitan ayaa kaa dhigi doonta inaad u diyaar garowdo dibadda, waxaad noqon doontaa musharrax aad u sarreeya oo xirfad u leh daabacaadda, hal-abuurka iyo warshadaha dhaqanka, farshaxanka, waxbarashada, iyo waaxda isgaarsiinta.
# 8 Jaamacadda Akhriska
Waxaa la aasaasay 1892 oo ku taal Berkshire, England, Jaamacadda Akhrisku waa mid ka mid ah iskuulada ugu wanaagsan suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal-abuurka ah waxayna tan iyo markaas saameyn togan ku yeelaneysay ardayda oo iyagu iyagu waxtarka ugu weyn u sameeyay bulshada iyo adduunka weyn.
Barashada suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal-abuurka ah ee Jaamacadda Akhriska ayaa kaa caawin doonta inaad ka baartid suugaanta dhinac walba. Dhanka suugaanta, waxaa lagugu baran doonaa qorayaal xiiso leh, muhiim ah, qoraalo kala geddisan oo qarniyo iyo adduunyo isugu jira, iyo dhinaca hal-abuurka qorista, waxaad ka baari doontaa hal-abuurka suugaanta ee gudaha sida sameynta jilayaal, sameynta gabayo, iyo sameynta male male.
Koorsada waxaa bixiya qorayaal caan ah oo abaalmarino ku guuleystay oo wali firfircoon isla markaana leh khibradahooda duurka, waxay kugu dhiirigelin doonaan oo kugu hagi doonaan si aad u gaarto hadafkaaga si guul leh.
# 9 Jaamacadda Oxford Brookes
Waxaa la aasaasay 1865 oo ku taal Oxford, England, Jaamacadda Oxford Brookes waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal-abuurka ah, oo sumcad caalami ah ku leh waxbarasho tayo leh, hal-abuurnimo, iyo barid heer sare ah iyo sidoo kale xiriirro adag oo lala yeesho ganacsiga iyo warshadaha.
Raadinta shahaadada suugaanta Ingiriisiga iyo qorista Jaamacadda Oxford Brookes waxay ka dhigan tahay inaad diyaar u tahay inaad kobciso awooddaada qoraa ahaan isla markaana aad naftaada ku riixdo xadka. Waxa ku bari doona qorayaal dhisan iyo abwaano kuwaas oo khibradooda iyo aqoontooda baaxada leh ee maadada kaa caawinaysa inaad qaabeyso qoraalkaaga adoo baranaya qoraalada suugaanta ee dhulka dhigaya.
Waxaad heli doontaa xorriyad inaad si dhab ah u horumariso una ogaato naftaada qoraa ahaan oo aad u hesho qalab iyo aqoon ay shaqaaluhu ugu baahan yihiin nolosha dugsiga ka dib.
# 10 Jaamacadda Swansea
Waxaa la aasaasay 1920 oo ku taal Wales, Boqortooyada Ingiriiska, Jaamacadda Swansea waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal-abuurka ah waxayna tan iyo markii ay bixisay aragti caalami ah iyo fursado lagu kasbado xirfado soconaya inta uu nool yahay.
Waxaa ku bari doona koorsadan qorayaal khibrad leh oo loo aqoonsaday shaqadooda, waxay kugu hagi doonaan inaad sahamiso noocyo iyo noocyo kala duwan iyo sidoo kale barashada taariikhda, dhaqanka, iyo aragtida suugaanta Ingriiska.
Waxaad sidoo kale baran doontaa xirfado qoraal oo kaladuwan si aad si fiican kuugu qalabeyso xirfad qoraa ahaan, oo ay kujiraan riwaayado, qoraallo filim, sheeko-xariir ah, iyo sheekooyin kuwaas oo kaa caawin doona inaad sameysid shaqo wanaagsan oo guuleysata shaqaalaha dowladda ama kuwa gaarka loo leeyahay.
Halkaas, waxaad haysataa liiska 10-ka jaamacadood ee ugu wanaagsan suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal-abuurka ah si ay kuugu arkaan adiga oo u maraya kobacaaga waxbarashada iyo horumarkaaga oo kuu horseedaya guul. Hal-abuurnimadu waa horseedka horumarka hal-abuurnimo ee adduunkeenna maanta iyo akhrinta koorso diiradda saareysa hal-abuurka waa hubaal in go'aan lagu abaalmarinayo in la qaato.
Shahaadadan la isku daray ee Suugaanta Ingiriisiga iyo Qoraalka Hal-abuurka ah waxay siineysaa qorayaasha soo koraya kuwa ugu wanaagsan labada adduun. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad noqoto gabyaa waxqabad, qoraa, ama la qabsado shaqada suugaanta shaashadda ama masraxa, ka fikir suugaanta dhinaca falsafada. Noocyada isku dhafan ee koorsadani waxay ka dhigayaan himilooyinkan oo dhan iyo kuwo la gaari karo.
jaamacadaha ugu fiican qoraalka hal abuurkajaamacadaha ugu wanaagsan Ingiriisigajaamacadaha ugu wanaagsan suugaanta IngiriisigaJaamacadaha ugu Fiican Suugaanta Ingiriisiga Iyo Qoraalka Hal-abuurka ahjaamacadaha ugu fiican qoraalkajaamacadaha loogu talagalay suugaanta Ingiriisiga iyo qorista hal-abuurka ah
Previous Post:5 Talaabo oo lagu helo Shahaadada Masterka bilaa Shahaadada
Post Next:Talooyin Ku Saabsan Helitaanka Shahaado Caalami ah
Pingback: 13-ka Jaamacadood ee ugu Fiican Sharciga Caalamiga ah - Adeegyada Waxbarasho ee Onlineka ah
Pingback: 10 Koorsooyinka Qorista Tooska ah ee Bilaashka ah ee Qorayaasha Cusub